Toptahlil Bounce Forex Swing Forex Ukuhweba Isu - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Amasu we Forex Toptahlil Bounce Forex Swing Forex Ukuhweba Isu
Toptahlil Bounce Forex Swing Forex Ukuhweba Isu
1 Toptahlil Bounce Forex Swing Forex Ukuhweba Isu
1.1 Ama-Bhendi Nezinkomba Eseziteshini
1.5.3 Ungayifaka kanjani i-Toptahlil Bounce Forex Swing Forex Ukuhweba Isu?
Kunezindlela eziningi zokusondela noma ukuhlasela imakethe, izinhlobo ezahlukahlukene zamasu okuhweba nezindlela ezahlukahlukene zokusebenzisa lawo masu. Abanye abathengisi baphuka izisekelo zokumelana nezinto, abanye bancamela ukuhweba ngenkani, abanye ukuhweba amasu okulandela amasu, abanye ukuhweba kusho ukubuyisela emuva. Noma ngabe iyiphi indlela oyithathayo, inqobo nje uma uwazi ubuciko bakho, ungayisebenzisa ukwenza imali emakethe. Ngaleli qhinga kodwa, sizobe sibheke ukuthatha imisebenzi ngokusekelwe kunqenqemeni kokuxhaswa okunamandla nokumelana sisebenzisa ukwahluka kweBollinger Band.
Ama-Bhendi Nezinkomba Eseziteshini
Amabhendi weBollinger mhlawumbe angenye yezinkomba ezaziwa kakhulu ezisebenzisa iziteshi noma amabhendi yize kukhona ezinye izinkomba ezihlukile ezenzelwe i-band. Zingahluka ngendlela amabhendi ahlanganiswa futhi ahlelwe ngayo, kepha basebenza benikezwe amapharamitha afanele.
Izinkomba ezenzelwe i-band zinhle ngoba ngenxa yezizathu eziningi, kodwa engikuthola kuthakazelisa kakhulu ukuthi kungenxa yamabhendi angaphandle anazo izinkomba lezi, zivame ukuba nezisekeli namandla ashukumisayo ahambisana nentengo emaphakathi. Lawa bendi angaphandle angasetshenziswa ngezindlela ezihlukile kepha indlela eyisisekelo yokusebenzisa amabhendi angaphandle injengendawo lapho esingacabanga ukuthi intengo inyuke kakhulu ngakho-ke ingabuyisela emuva esimeni noma isishintshe ngokuphelele isimo.
Abathengisi abaningi bayawazi amaBollinger Bands nokuthi angawasebenzisa kanjani. Ngaleli qhinga kodwa, sizobe sisebenzisa ukwahlukahluka kwe-Bollinger Band, the toptahlil_bollinger_and_atr_band inkomba yangokwezifiso. Le nkomba ine-Bollinger Band ejwayelekile, kodwa futhi inesethi yesibili yamaqembu angaphandle, okususelwa ebangeni eliyi-A average True Range (ATR). Lokhu kunikeza le nkomba amasethi amabili ebhendi engaphandle esingayisebenzisa njengendawo yokusekela enamandla noma yokumelana.
Sizobe sithengisa izinto ezingahambi kahle kule ndawo noma nini lapho sibona ikhandlela elikhazimulayo elinama-wick libonisa ukwenqaba kwalezi zindawo.. Sizobe sisebenza ngokuthengisa izintambo ezinde ngoba la makhandlela asho ukushintshwa okusheshayo kwemizwa yemakethe, ushintsho olwenzeka esikhathini esisodwa noma ikhandlela.
Noma kunjalo, ngeke sithathe ukuhweba ngokushesha lapho kuvela ikhandlela le-pin bar. Sizolinda intengo ukuthi ibambe intengo ephakathi. I- toptahlil_bollinger_and_atr_band ayinayo i-midline. Ngokwalesi sizathu, sizobe sisebenzisa inkomba ehlukile njengesisekelo sentengo yethu emaphakathi, the TMA inkomba yangokwezifiso. Isikhombi lolu hlobo lwesilinganiso sokuhamba esingabonakala senkomba yokuhamba ebushelelezi.
Noma ngabe siqaphela ukuhweba okungenzeka noma nini lapho intengo iphuma ngaphandle kwamabhanti angaphandle we toptahlil_bollinger_and_atr_band, uma siqala ukuhweba kusenesikhathi, sisengakwazi ukuthengisa ngokumelene nalokhu kuthambekela. Esikhundleni sokuhweba ngaso leso sikhathi nje lapho intengo ibamba kusuka kumabhande angaphandle, sizobe sithatha ukuhweba lapho inguquko yemikhuba iqinisekiswa ngokulinda intengo ukuthi iwele futhi isondele ngale kwe TMA inkomba yangokwezifiso.
toptahlil_bollinger_and_atr_band: amapharamitha azenzakalelayo
TMA: amapharamitha azenzakalelayo
Ubude besikhathi: 1-ihora noma angu-4 ishadi
Intengo kufanele ibe yindawo esezingeni eliphansi ama-toptahlil_bollinger_and_atr_bands
Kufanele kube nekhandlela le-phini ye-bullish noma ikhandlela elinezintambo ezinde ezansi, kubonisa ukunqatshwa kwentengo
Lindela intengo ukuze uwele futhi uvale ngaphezu kwe TMA inkomba yangokwezifiso
Setha intengo yethagethi yenzuzo ku-2x ubungozi ekulahlekelweni kokuma
Intengo kufanele ibe yindawo engaphezulu ama-toptahlil_bollinger_and_atr_bands
Kufanele kube nekhandlela le-bar yephinikhodi ye-bearish noma isibani sekhandlela esinezintambo ezinde phezulu, kubonisa ukunqatshwa kwentengo
Lindela intengo ukuze uwele futhi uvale ngezansi kwe TMA inkomba yangokwezifiso
Amasu asusa amabhende angaphandle amaBollinger Bands ajwayelekile isu elijwayelekile futhi abathengisi abaningi babe nenzuzo ngokwenza lokho. Noma kunjalo, Kunezimo eziningi lapho isigaxa sangaphandle singekho siqine ngokwanele ukuguqula inkambiso. Lokhu kungasebenza uma uhweba ngecebo elilula lokubuyisela emuva elihlose maphakathi neBolling Band noma intengo ephakathi.
Uma ungathanda ukuthatha abathengisa ngejusi ethe xaxa kuyo, kuzofanela ukuthi uthathele abathengisa okuphumela ekuguqukeni komkhuba. Leli su likuvumela ukuba wenze lokhu ngokungena ngemuva kwesiphambano se TMA inkomba yangokwezifiso, okuyimali yethu ephakathi.
Kuzoba nezimo eziningi lapho intengo ingaqala khona inkambiso eqinile futhi uma uvumela inzuzo ukuthi iqhubeke, kungenzeka ukuthi uhola ngaphezu kwengozi yakho kabili. Uma uzizwa unolaka ngokwengeziwe futhi ukhetha ukubhekela ukubuyiselwa okuphezulu, esikhundleni sokusebenzisa ithagethi yenzuzo ethosiwe, ungasebenzisa esikhundleni sokwenza ukulahleka kokuma kokulandela, noma vala ukuhweba ngokusekelwe kwizimpawu zokuguqula isenzo samanani. Noma kunjalo, lokhu kungaba yindlela enolaka kakhulu ongayithatha njengoba inani lingabuyela kuwe noma liqale ukwakha ibanga, esikhundleni sokubuyisa ngokuphelele inkambiso.
I-Toptahlil Bounce Forex Swing Forex Ukuhweba Isu yinhlanganisela yeMetatrader 4 (MT4) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
I-Toptahlil Bounce Forex Swing Forex Ukuhweba Isu linikeza ithuba lokuthola ubuntu obuhlukahlukene namaphethini kumandla wamanani entengo angabonakali ngamehlo anqunu.
Ungayifaka kanjani i-Toptahlil Bounce Forex Swing Forex Ukuhweba Isu?
Landa i-Toptahlil Bounce Forex Swing Forex Ukuhweba Isu.zip
Hambisa kwesokudla ukuze ukhethe isu likaToptahlil Bounce Forex Swing Forex Ukuhweba
Uzobona i-Toptahlil Bounce Forex Swing Forex Ukuhweba Isu Kuyatholakala Eshadini lakho
Isiqephu esedluleEfficiency Isilinganiso kokuqondisa nge Amazinga MT5 Inkomba
Isihloko esilandelayoSnr Fast sezinwele Forex Ukuhweba Isu